‘म स्वस्थ मेरो देश स्वस्थ’ अभियान कास्कीमा सञ्चालन | Jukson
मेरो वर्ष ‘म स्थस्थ मेरो देश स्वस्थ’ राष्ट्रिय अभियान आज देखि कास्कीमा पनि सञ्चालन गरिएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि डा. पन्तले हाम्रो खानपान र जीवनशैली परिवर्तन गर्नुनै यो अभियानको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । किनभने अहिले सर्ने रोग भन्दा नसर्ने रोगले मानिस पिडित छन् त्यसको कारण भनेको हाम्रो अव्यस्थित जीवन शैली हो उहाँले भन्नुभयो— त्यहि जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न सकेमा स्वस्थ हुन सकिन्छ । आफ्नो खानपानमा ध्यान दिने, व्यायाम गर्ने, धुम्रपान मध्यपान नगर्ने र नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गर्न सके स्वस्थ हुन सकिने उहाँले बताउनुभयो । यो अभियान प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, टोल, समाजको सरोकारको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ उहाँले यो अभियान नियमित सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिनभयो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. तारानाथ पौडेलले नेपालमा पहिला खाना नपाएर मानिस रोगी हुन्थे भने अहिले धेरै खाएर बिरामी हुने गरेको बताउदैं खानपानमा परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उँहाले आफ्नो स्वास्थ्यमा सानो लगानी गरेपनि जिवन स्वस्थ बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले अभियान काठमाण्डौबाट पोखरा आउन २१ दिन लाग्यो भने घरघरमा पुग्न कति दिन लाग्ला? भन्ने प्रश्न गर्दै अभियान कत्तिको व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छ त्यो चुनौतिको विषय भएको बताउनुभयो । यदि यो अभियान व्यवहारमा लागु गर्न सके यसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कायापलट गर्न सक्ने बताउनुभयो । अभियान व्यवहारमा लागु गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले त्यसको लागि सघाउन सञ्चारमाध्यम तयार रहेको बताउनुभयो । यस सम्बन्धि विषय आगामी वर्षदेखि पाठ्यपुस्तकमा नै समावेश गर्न सके यो अभियान अझ प्रभावकारी हुनेमा उहाँको जोड थियो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयका उपस्वास्थ्य प्रशासक पुरुषोत्तम सेढाईले अभियानको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. तारानाथ पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत जिल्ला जनस्वास्थ्य कास्कीका प्रशासक दिनेशकुमार चापागाँईले र कार्यक्रम सञ्चालन संस्थाका कम्प्युटर अधिकृत रबिन्द्र घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गर्नुभएको यो राष्ट्रिय अभियानको आज कास्की सहित ७५ जिल्लामा नै शुभारम्भ गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । यस अभियानको लागि ‘मेरो ५ प्रतिवद्धता, स्वास्थ जीवनको आवश्यकता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । ५ प्रतिवद्धतामा म रक्सी, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ खान्न, म नियमित व्यायाम गर्छु, म स्वस्थ र पोषिलो खाना खान्छु, म नियमित स्वास्थ्य परिक्षण गराउँछु र म मेरो परिवार र समुदायको स्वास्थ्यप्रति सजग रहन्छु रहेका छन् ।
पानी पर्नासाथ ‘निगुरा’ टुसाउँछन् - बसन्त प्रकाश उपाध्यय
पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्रीएपछि पेट्रोल लिनेहरुको भिड
काठमाडौंको साहाराका विद्यार्थीले यसरी उडाए आफैले बनाएको ड्रोन